Whonye Ka Want Chọrọ Soro Na-arụ Ọrụ? | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 2, 2009 Fraịde, Ọktọba 2, 2009 Douglas Karr
Anọ m na-arụ ọrụ ike na izu ole na ole gara aga iji nweta azụmaahịa m n'ala. Arebọchị ejirila ịkparịta ụka na mgbede na mgbede / ngwụsị izu ejirila wepụta ihe ndị m kwere. Ọ naghị agazue oke, mana ọ n’aga n’ihu. Na nke a aku na uba, M dịkwa mma na na.
Cozụ ahịa enyerela m aka ịghọta nke ọma ihe ndị ahịa m chọrọ bụ, soro m mee atụmanya, ma mechie ngwa ngwa ka ihe wee ghara ịdọrọ ma ọ bụ belata m. Ana m eme ngwa ngwa, na-agbanye aka ma na-ewere aha. Ma, o nwebeghị onye nyere m aka ka m gbaa ndị enyi m ume.
Taa, anyị nwere nnukwu mmeri. Otu di na nwunye nke ulo oru m na-arụ ọrụ na-enyere aka na nso mmechi a ekwe ohere na a ton nke nwere. Otu nnukwu ụlọ ọrụ mụ na ha rụkọrọ ọrụ oge ụfọdụ bịanyere aka aka na obere nkwekọrịta iji nwalee amamịghe anyị ma hụ ihe anyị ga-emere ha. Ana m ekele ruo mgbe ebighị ebi.
Ndị enyi m nwere obi ụtọ mgbe ha nụrụ ozi ahụ! Ọ bụ ezigbo ndị enyi m na-agba m ume ugbu a, na-akpali m, na-akwado m, na-eduga ndu, ma nọrọ ebe ahụ mgbe enyemaka dị m mkpa. Ha arịọbeghị maka ịkpụ na atụla anya otu dime. Ha maara na nke abụọ m nwere azụmaahịa zuru ezu ịgagharị, anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ.
Ndị ọzọ mere ihe dị iche. Nke kacha agbawa obi ụlọ ọrụ onye m na-eche nke ọma banyere ịdọrọ m n'akụkụ ma jụọ ihe mere na enwetaghị m ngwaahịa ha n'ahịa ahụ. Akpata oyi wụrụ m na mbụ, ugbu a iwe na-ewe m. Emeela m afọ iri gara aga na Indianapolis na-eme ka ụlọ ọrụ ndị a nwee ihe ịga nke ọma, na-enyere ha aka na-enweghị ụgwọ mgbe ha jụrụ, na ịkwalite ha na ohere ọ bụla.
Akwaliteghị m ha n’ihi na echere m na ọ ga-ewetara m ego. Emere m ya n'ihi na m hụrụ ụlọ ọrụ na-ahụ ihe ịga nke ọma anya, ọtụtụ ndị mmadụ na-ewe ọrụ, ma na-ele mpaghara ahụ ka ha na-eto. Ha bụ ndị enyi m, ana m achọkwa ka ndị enyi m nwee ihe ịga nke ọma.
Kedu onye ị ga-achọ iso rụọ ọrụ? Youchọrọ ka gị na ndị na-arụsi ọrụ ike debe akara, na-echegbu onwe ha banyere ụgwọ ị ji ha, ma ọ bụ ihe ị ga-enweta? Ma obu na ichoro iso ndi mmadu mara na odi nma onye obula n'ime anyi, nke oma karie anyi nile.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-esiri m ike ịkwalite ụlọ ọrụ ahụ oge nke ọzọ nri ohere abịa. Aghọtara m ugbu a na ha na-ahụ m naanị dịka ngwá ọrụ iji 'nweta nke ha'. Nke ahụ bụ ihe nkoropụ ma m dịkwa mma na ya… Enwere m ọtụtụ ndị enyi ndị ọzọ nke mere m obi ụtọ taa.
Aga m agba mbọ hụ na m buru ụzọ lekọta ndị enyi m. Ndị ahụ bụ ndị m chọrọ ịrụ ọrụ.
Ọkt 2, 2009 na 6:29 PM
E kwuru nke ọma, Doug. Azụmaahịa abụghị naanị azụmahịa. Ọ bụ mmekọrịta.
Ọkt 3, 2009 na 4:40 AM
Nnukwu ibe Doug. Enweghị ike ikwenye gị karịa.
Ọkt 4, 2009 na 9:30 PM
Ana m ekele gị ọzọ na ọdịda ohere a, gị na ndị enyi m ndị ọzọ nọ na ya. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka azụmahịa gị na-eto! Naanị adịla nnukwu ibu iso gị pụọ @thebeancup na anyị (na m ga-edebe iko ndị ahụ na-abịa!).
Ọkt 5, 2009 na 3:12 PM
Olileanya na enyemaka site na post a, ụlọ ọrụ ahụ a na-ekwu maka ya ga-alọghachi. Mmekọrịta na-eme nke ahụ site n’oge ruo n’oge.